ဟွေလူမျိုး - ဝီကီပီးဒီးယား
ဟွေလူမျိုး ( တရုတ်; ဟွေအိကျူ , Xiao'erjing : خُوِذُو‎ ; Dungan , Xuejzw ) သည် အရှေ့အာရှ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုဖြစ်ပြီးအဓိကအားဖြင့်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ပြည်နယ်များနှင့် Zhongyuan ဒေသများ ရှိ တရုတ်နိုင်ငံ တစ်လွှားတွင်တွေ့ရသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တရုတ်လူမျိုးများဖြစ်ကြသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှုအရတရုတ်နိုင်ငံတွင် ဟွေလူမျိုး ၁၀.၅သန်းနေထိုင်သည်။ အများစုမှာ တရုတ်ဘာသာစကားပြော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များဖြစ်သော်လည်း အချို့မှာအခြားဘာသာတရားများကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ ကာဇတ်စတန်နှင့် ကာဂျစ္စတန်နိုင်ငံရှိ ဒူဂန်းလူမျိုး ၁၁၀,၀၀၀ဦးကိုလည်း ဟွေလူမျိုးစုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။
ရိုးရာဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်ထားသည့် ဟွေအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး၂ဦး
10,586,087 (2011 Census[ကိုးကားချက်လိုသည်])
Mainly Sunni Islam (≈50% Hanafi, 20% Wahhabism, 20% Sufism), some Hui also follow Buddhism
နှင့် အခြား တရုတ်-တိဘက်နွယ် လူမျိုးများ
ဟွေ ဗလီ တစ်ခုတွင်ဆုတောင်းနေသည်
ဟွေလူမျိုးများသည် တရုတ်နိုင်ငံမှအသိအမှတ်ပြုထားသည့်လူမျိုးစု ၅၆မျိုး အနက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အစိုးရကဟွာလူမျိုးများအားသမိုင်းကြောင်းအရ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အခြားတိုင်းရင်းသားအုပ်စုများတွင် မပါဝင်သည့် မွတ်စလင်အသိုင်းအဝိုင်းအဖြစ် ထည့်သွင်းရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည် ဟွီဂါးရ် ကဲ့သို့သောအခြားမွတ်စလင်အုပ်စုများနှင့်ကွဲပြားသည်။ ဟွေများသည်အဓိကအားဖြင့် တရုတ် စကားပြော  ၊ အာရဗီ နှင့် ပါရှန်း စကားစုအချို့ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။  စင်စစ်အားဖြင့် ဟွေလူမျိုးစုသည် တရုတ်လူမျိုးများကြားတွင်ထူးခြားသည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည် တရုတ် ဘာသာစကား အနွယ် မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၁၉၄၉ တွင်တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံကိုတည်ထောင်ပြီးနောက်ဟွိုင်ဟူသောဝေါဟာရကိုတရုတ်အစိုးရမှသမိုင်းကြောင်းအရအစ္စလာမ်လူနည်းစု (၁၀) ခုအနက်တစ်ခုသို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ 
အစောပိုင်း၌ ထိုဝေါဟာရသည် တရုတ်စကားပြော (နိုင်ငံခြားသား) မုစလင်အုပ်စုများကိုရည်ရွယ်ပါသည်။ အစ္စလာမ်ကိုကျင့်သုံးခြင်းသည်စံနှုန်းမဟုတ်ပေ။ တရုတ်သို့ပြောင်းရွှေ့လာသည့်နိုင်ငံခြားသားမွတ်စ်လင်မ်များကိုဖော်ပြရန် ဟွာအသုံးကို ဆောင်မင်းဆက် (၉၆၀ – ၁၂၇၉အထိ)လက်ထက်မှစတင်သုံးခဲ့သည်။
သက်ကြီးရွယ်အို ဟွေအမျိုးသားတစ်ဦး ။
ကန်းစု ရှိ ဟွေသည် တန် (唐) နှင့် ဝမ် အမည်ရှိလူမျိုးစု ဟန်တရုတ်မှ ဆင်းသက်လာသူဖြစ်ပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းပြီီး မွတ်စလင် Hui နှင့် Dongxiang လူမျိုးများနှင့်လက်ထပ်ခဲ့ပြီးသူတို့၏လူမျိုးစုကိုပြောင်းလဲကာ Hui နှင့် Dongxiang တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ Tangwangchuan နှင့် Hanjiaji တို့သည်လူမျိုးပေါင်းစုံအသိုင်းအဝိုင်းရှိသည့်မြို့များ၊ မွတ်စလင်မဟုတ်သူများနှင့်မွတ်စ်လင်မ်တို့နှင့်ထင်ရှားသည်။ 
တန်မင်းဆက်လက်ထက်တွင် ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကိစ္စများနှင့်အစ္စလာမ်ပြန့်ပွားရေးကိုစိတ်မဝင်စားသောအီရန်ကုန်သည်များမှတစ်ဆင့်အစ္စလာမ်သည်တရုတ်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဒီအနိမ့်ပရိုဖိုင်းကိုအဆိုပါကာလအတွင်း 845 Anti-ဗုဒ္ဓဘာသာအမိန့်ပြန်တမ်းများကညွှန်ပြနေသည် ဂရိတ် Anti-ဗုဒ္ဓဘာသာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်း အစ္စလာမ်ဘာသာအကြောင်းကိုဘာမျှမပြောခဲ့။  trade ၀ ံဂေလိတရားထက်ကုန်သွယ်ရေးသည်အစောပိုင်းမွတ်စလင်အခြေချသူများ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ တရုတ်အပေါ်ယုံကြည်မှုရှိသော်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ကွန်းဖြူးရှန်းဝါဒ၊ တာအို (သို့) နိုင်ငံတော်အယူဝါဒကိုဆန့်ကျင်။ စည်းရုံးခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ ၎င်းတို့သည်တရုတ်နှင့်အနောက်နိုင်ငံများအကြားရေရှည်တည်တံ့မည့်လူ ဦး ရေထက်မရေမတွက်နိုင်အောင်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။  
ဆောင်မင်းဆက် ကာလအတွင်းနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးတွင်မွတ်စလင်မ်များအဓိကနေရာမှပါဝင်ခဲ့သည်။     ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနကိုမွတ်စလင်တစ် ဦး ကအမြဲတမ်းကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။  သီချင်းမင်းဆက်ကနေမွတ်စ်လင်ကြေးစားငှားရမ်းထား Bukhara တိုက် Khitan ဖြစ်လျက်။ ၁၀၇၀ တွင် Song ကရာဇ် Shenzong က Bukhara မှမွတ်စလင် ၅,၃၀၀ ကိုဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိ Liao အင်ပါယာကိုတိုက်ဖျက်ရန်နှင့်ပျက်စီးနေသောဒေသများကိုပြန်လည်နေရာချထားရန်ဖြစ်သည်။ ဤလူများသည် Sung မြို့၏ Kaifeng မြို့နှင့် Yenching (ခေတ်သစ် ပေကျင်း ) အကြားအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ၁၀၈၀ တွင်မြောက်ပိုင်းနှင့်အရှေ့မြောက်ပြည်နယ်များကိုမူမွတ်စ်လင်မ်တစ်သောင်းကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံသို့ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ကို Bukhara ၏ Amir၊ Sayyid " So-fei-er " ကိုတရုတ်ဘာသာဖြင့် ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ သူ့ကိုအစ္စလာမ်ဘာသာ၏ဖခင်ဟုခေါ်သည်။ Tang နှင့် Song Chinese တို့ကအစ္စလာမ်ကို Dashi fa ("အာရပ်ဥပဒေ") အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ သူကအစ္စလာမ်ကို Huihui Jiao (“ Huihui ၏ဘာသာတရား”) ဟုအမည်သစ်ပေးခဲ့သည်။
ယူနန်ပြည်နယ် ရှိ Pingnan Sultanate ၏မြို့တော် Dali ကိုဖမ်းဆီးပြီး မွတ်စလင်များအားအောင်ပွဲခံ
ဟွေလူမျိုးများကသူတို့၏အမည်များကိုယူနန်သို့မဟုတ်မင်ခေတ်အတွင်းအချို့သောနိုင်ငံခြားသားမွတ်စလင်ဘိုးဘေးများ၏“ အပြစ်ပြုခြင်း” ပုံစံဖြင့်စတင်သည်ဟုအများအားဖြင့်ယုံကြည်ကြသည်။  ဘုံဟီတို့၏အမည်များ -    
↑ "By choosing assimilation, China's Hui have become one of the world's most successful Muslim minorities"၊ The Economist၊ 8 October 2016။ 8 October 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ Gladney 1996.
↑ Michael Dillon (16 December 2013)။ China's Muslim Hui Community: Migration, Settlement and Sects။ Taylor & Francis။ pp. 154–။ ISBN 978-1-136-80940-8။
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ ၄.၃ Lipman 1997.
↑ Herbert Allen Giles (1926)။ Confucianism and its rivals။ Forgotten Books။ p. 139။ ISBN 1-60680-248-8။ 2011-12-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Frank Brinkley (1902)။ China: its history, arts and literature, Volume 2။ J. B. Millet။ 2011-12-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Original from the University of California
↑ Frank Brinkley (1904)။ Japan [and China]: China; its history, arts and literature။ Jack။ 2011-12-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Original from Princeton University
↑ ၈.၀ ၈.၁ BBC 2002.
↑ Ting 1958.
↑ Blum၊ Susan Debra။ China off center: mapping the margins of the middle kingdom။ University of Hawaii Press။ p. 121။ 2011-04-09 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Rubin 2000.
↑ Manger၊ Leif O.။ Muslim diversity: local Islam in global contexts။ Routledge။ p. 132။ 2011-04-09 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dillon 1999, p. 33.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဟွေလူမျိုး&oldid=702378" မှ ရယူရန်
၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၆:၅၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၆:၅၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။